OnlineCasinosOnline.co.za GDPR - Zomthetho Ojwayelekile Wokuvikela Imininingwane
I-OnlineCasinosOnline.co.za yiwebhusayithi ebhekele ikakhulukazi imakethe yemidlalo ye-inthanethi yaseNingizimu Afrika. Iwebhusayithi yethu ivumelana ngokugcwele nezimfuneko Zomthetho Ojwayelekile Wokuvikela Imininingwane (GDPR).
Imithetho ye-GDPR idinga ukuthi izinkampani zivekele ubumfihlo nemininingwane yomuntu siqu yezakhamuzi ze-EU ngokudayiselana okwenzeka kuwo wonke amazwe angamalunga e-EU.
I-GDPR yakhishwa yiPhalamende laseYurobhu ngoApreli 2016. Ngaphezulu kwalokho, i-GDPR ilawula ukuthunyelwa kwemininingwane yomuntu siqu ngaphandle kwe-EU. I-GDPR ivikela izinhlobo ezahlukahlukene zemininingwane yobumfihlo zibandakanya:
Ulwazi ngomuntu (isibonelo: igama, inombolo kamazisi, kanye nekheli)
Idatha yewebhusayithi (isibonelo: ikheli ye-IP, indawo okuyo, kanye nedatha yama-cookie)
Imininingwane yobuhlanga nobuzwe
Imininingwane yesimo sempilo, izakhi zofuzo, kanye nezici zomuntu ngamunye
I-GDPR manje idinga ukuthi izinkampani zinikeze ngezinga elifanayo lokuvikelwa kwama-cookie kanye namakheli e-IP omuntu ngamunye njengenye imininingwane efana namagama amakhasimende, ikheli lasekhaya, nenombolo kamazisi. Futhi idinga ukuthi izinkampani zinikeze amakhasimende azo izinga “elifanele” lokuvikelwa kwemininingwane yomuntu siqu.
Kungani i-GDPR Ikhona?
Ngamafushane, inhloso enkulu ukubhekana nokukhathazeka komphakathi mayelana nobumfihlo. Ngokomlando iYurobhu ibinemithetho eqinile yokuthi izinkampani ziyisebenzisa kanjani imininingwane yomuntu siqu. Esikhundleni se-European Union’s Data Protection Directive (1995) kufakwe i-GDPR. Lokhu kwenziwe isikhathi eside ngaphambili kokuthi i-inthanethi ibe yindawo yebhizinisi engenisa amadola angaphezulu kwe-1 trillion ngonyaka. Ngenxa yalokho, umyalo ka-1995 umdala kakhulu futhi awubhekani nezindlela eziningi imininingwane eqoqwa ngayo, egcinwa ngayo, kanye nendlela edluliswa ngayo ezikhathini zanamuhla.
Izinkinga zobumfihlo sezikhathaze kakhukhulu e-EU. Ucwaningo lwe-RSA luveze ukuthi ukukhathazeka okuphezulu kwabathengi abayi-80% e-UK, e-France, e-Germany nase-US yimininingwane elahlekile yasebhange/yezezimali. Khonamanjalo, amakota amathathu abaphendulile bathi imininingwane elahlekile yezokuphepha njengamaphasiwedi nemininingwane kamazisi bekukhathaza.
Ukulandelwa Komthetho Ngaphakathi Kwezinkampani
I-GDPR ibala izindima eziningi ezifanele ziqinisekise ukulandelwa komthetho. Zibandakanya umcubunguli wedatha, umlawuli wedatha, kanye nomvikeli wedatha (DPO). Abalawuli bedatha bachaza indlela imininingwane yomuntu eqhutshwa ngayo nezinhloso zokuyicubungula. Baphinde baqinisekise ukuthi ukulandelwa komthetho kuhlinzekwa osonkontileka bangaphandle.
Abacubunguli bedatha bangaba ngamaqembu angaphakathi aphatha futhi acubungule idatha yomuntu siqu kanye nezinkampani zangaphandle ezenza ingxenye noma wonke umsebenzi. I-GDPR iyenza ukuthi icala libekwe kubacubunguli uma bengalandeli umthetho. Kokubili inkampani yakho, kanye nomhlinzeki wamasevisi ekhopyutha noma omunye umcubunguli ongumlingani kuzobekwa icala nenhlawulo. Lokhu kuyiqiniso ngisho noma icala, 100%, likumcubunguli ongumlingani.
I-GDPR Izishintsha Kanjani Izinkontileka Zamakhasimende
I-GDPR ibeka inani elilinganayo lecala kubalawuli bedatha kanye nabacubunguli bedatha. Uma omunye umcubunguli wesithathu angawulandeli umthetho, kusho ukuthi inkampani nayo ayiwulandeli umthetho. Ngaphezulu kwalokhu, umthetho omusha unemithetho eqine kakhulu mayelana nokubika ukwephulwa komthetho futhi wonke umuntu okumayelana naye kudingeka ukuthi ayilandele. I-GDPR futhi idinga izinkampani ukuthi zazise amaklayenti azo ngamalungelo awo ngaphansi komyalo we-EU.
Ngamanye amazwi, zonke izinkontileka zamanje nabacubunguli kanye namakhasimende kufanele zibhale phansi imithwalo yemfanelo. Ngaphezulu kwalokhu, izinkontileka ezibuyekeziwe kumele futhi zichaze izinqubo ezingaguquguquki zokuthi imininingwane ivikelwa nokuthi iphathwa kanjani, kanye nendlela okuyobikwa ngayo ukwephulwa komthetho.
Kumele izinkontileka ezibuyekeziwe zamaklayenti zitshengise ukushintshwa komthetho. Amafomu amaningi angasetshenziswa njengezinkontileka zamakhasimende. Kubandakanya izivumelwano ezijwayelekile neziku-inthanethi ezichofozwayo. Kubalulekile ukuthi abasebenzisi besithathu bazi indlela imininingwane ecutshungulwa ngayo nendlela egcinwa ngayo, futhi bavumelane nendlela yokubika.
Umnqamulajuqu wokuthi izinkampani zitshengise ukulandela i-GDPR kwakungomhlaka 25 Meyi, 2018.
Ushintsho Emigomeni Nemibandela ye-OnlineCasinosOnline.co.za
Ngenxa yokuthuthuka okuqhubekayo kwewebhusayithi ngezikhathi ezithile kungadingeka ukuthi kuguqulwe Imigomo Nemibandela futhi i-OnlineCasinosOnline.co.za ihlala inelungelo elisemthethweni lokuthatha leso sinyathelo ngokufaka ushintsho ku-inthanethi. Abasebenzisi banomthwalo wemfanelo wokubuyekeza Imigomo Nemibandela njalo. Ukuqhubeka kwakho usebenzisa iwebhusayithi yethu ulandela noma yiziphi izichibiyelo ezifakiwe kubhekwa njengokwamukela kwakho lezo zinguquko kuMigomo Nemibandela.
Lokhu kuchaza ukuthi yiziphi izinhlobo zemininingwane yomuntu siqu eqoqwa iwebhusayithi yethu nezizathu zokuyiqoqa kwethu.
Uma izivakashi zewebhusayithi yethu zishiya amazwana, idatha ivela kufomu lamazwana. Eminye imininingwane ekhonjisiwe yikheli le-IP lesivakashi nophawu lwe-ejenti lesiphequluli ukusiza ukuthuthukisa ukwenqaba imiyalezo engafuneki (spam).
Kungenzeka ukuthi uphawu olungaziwa (hash) olwenziwe ngekheli lakho le-imeyili lunikezwe isevisi ukuze ihlole ukuthi uyalusebenzisa yini. Kubalulekile ukufunda inqubomgomo yobumfihlo yesevisi. Ngemuva kokuthi kuvunyelwe amazwana akho isithombe sakho sephrofayili siyabonakala emphakathini esigabeni samazwana.
Uma uthinta i-OnlineCasinosOnline.co.za ngefomu lokuxhumana laleli sayithi, imininingwane igcinwa isikhathi esisibona sifanele. Kepha, akukho mininingwane esetshenziselwa noma uluphi uhlobo lwenhloso yokukhangisa.
Idatha Yakwezinye Izindawo Efakiwe
Izindatshana ezitholakala kule webhusayithi zingafaka idatha yakwezinye izindawo njengezindatshana, izithombe, namavidiyo. Idatha yakwamanye amawebhusayithi isebenza ngendlela efana nokuthi isivakashi sivakashele lawo mawebhusayithi.
Amawebhusayithi angase aqoqe imininingwane emayelana nawe futhi asebenzise ama-cookie. Futhi ingabheka ukusebenzisa kwakho kwedatha yakwezinye izindawo, okubandakanya ukulandelela ukusebenzisa kwakho kwedatha yakwezinye izindawo uma une-akhawunti futhi ungene ngemvume kuleyo webhusayithi.
I-OnlineCasinosOnline.co.za ayinikezi izivakashi idatha yayo. Kepha, sisebenzisa uhlelo (plugin) lomhlinzeki wesithathu ukusinikeza idatha encane esingayisebenzisa. Qinisekisa ukuthi ufunde inqubomgomo yobumfihlo mayelana ne-plugin.
Siyigcina Isikhathi Eside Kangakanani Imininingwane
Uma kungukuthi ushiya amazwana khona-ke ukuphawula ne-metadata kugcinwa ngokungapheli. Sithatha lesi sinyathelo ukuze sikwazi ukukhumbula noma ukuvumela ngokuzenzakalela ukuphawula okulandelayo kunokusebenzisa ulayini wokulinganisela ukuwagcina amazwana.
Siphinde sigcine imininingwane yakho kumaphrofayli omsebenzisi anikezwe abasebenzisi ababhalisa ku-OnlineCasinosOnline.co.za. Abasebenzisi bayakwazi ukubuka, ukuhlela, nokususa imininingwane yomuntu noma nini, kodwa abakwazi ukuguqula igama lomsebenzisi. Abaphathi bewebhusayithi bayakwazi ukubuka nokuhlela imininingwane.
Amalungelo Omsebenzisi Mayelana Nemininingwane
Uma ungumnikazi we-akhawunti kule webhusayithi noma ushiye amazwana uyakwazi ukucela ukuthola ifayela eliqukethe imininingwane esiyigcina ngawe. Lokho kubandakanya noma yimiphi imininingwane osinikeze yona. Ngaphezulu kwalokho, ungacela ukuthi iwebhusayithi yethu isule yonke imininingwane yomuntu siqu ehlobene nawe. Lokhu akubandakanya noma iyiphi imininingwane okudingeka siyigcinele ukuphathwa, ukuphepha, noma izizathu ezingokomthetho.
Lapho Esithumela Khona Imininingwane Yakho
Amazwana ezivakashi angahlolwa yisevisi yokuthola i-spam.
Uyakwazi ukuxhumana nathi ngefomu lethu lokuxhumana nge-Intanethi uma uneminye imibuzo maqondana nalezi zinkinga.
Ngaphambili kokuxoxa ngenqubomgomo ye-cookie yenkampani yethu kubalulekile ukuwachaza ngokwawo amakhukhi. Lawa ngamafayela amancane agcinwe kudivayisi yabasebenzisi bethu njenge-PC, ithebhulethi, noma ifoni. Enzelwe ukugcina inani elincane lemininingwane ethile ehlobene nekhasimende kanye newebhusayithi. Imininingwane ingafinyelelwa yikhompyutha yeklayenti noma iseva yewebhu.
Lokhu kunikeza iseva amandla okuletha ikhasi elenzelwe umsebenzisi othile. Ngaphezulu kwalokhu, ikhasi lingafaka uphawu (script) olwazi imininingwane ku-cookie. Ngakho-ke, iyakwazi ukudlulisa imininingwane ekuwebhusayithi eyodwa oyivakashele iyise kwenye.
Wonke ama-cookie ayitafula elincane lokubheka. Liqukethe izilinganiso ezimbili. Ngemuva kokufundwa kwe-cookie imininingwane ingaqoqwa bese isetshenziselwe ukwenza amakhasi esiphequluli abe ngokwezifiso.
Ukusebenzisa Nokubheka Ama-Cookies
Uma ufuna ukubheka uma amasethingi esiphequluli sakho avumela ama-cookie yini vakashela amasayithi afana ne-Cookie checker. Kuyasiza ukwakha i-cookie bese ubika uma ngabe kuphumelele. Qinisekisa ukuthi ufunda imininingwane yokuthi ungawavumela kanjani kanye nokuthi ungawavala kanjani ama-cookie. Kufanele futhi ufunde ukuthi ungawasusa kanjani futhi uwasule kanjani amakhukhi.
Iningi leziphequluli zinesikrini samasethingi esivumela umsebenzisi ukuthi abuke ukuthi yimaphi ama-cookie agcinwe yikhompyutha, futhi awasuse. Kubalulekile wazi ukuthi akwenzeki ukuthi amakhasi e-webhusayithi abone ama-cookie asethwe amanye amasayithi. Isizathu ukuthi lesi simo sizodala inkinga yokuphepha nobumfihlo.
I-OnlineCasinosOnline.co.za isebenzisa ubuchwepheshe bama-cookie nokulandelela ngokuya ngezici ezahlukahlukene ezinikezwayo. Sisebenzisa ubuchwepheshe bama-cookie nokulandelela ukuqoqa idatha efana nohlelo lwekhompyutha nohlobo lwesiphequluli. Silandelela izinto ezifana nenani labavakashi bewebhusayithi yethu futhi siqonde ukuthi izivakashi zethu ziyisebenzisa kanjani iwebhusayithi.
Ama-cookie asetshenziselwa ukwenza ngokwezifiso iwebhusayithi yethu ukuze izivakashi zibe nesipiliyoni esihle sokusebenzisa iwebhusayithi. Ubuchwepheshe bokulandelela obunjengama-cookie abukwazi ukuqoqa imininingwane yomuntu siqu. Ngakolunye uhlangothi, uma unikeze imininingwane ekhomba wena kuma-cookie edlule ingaxhunywa kulolo lwazi. Imininingwane yokulandelela kanye neyama-cookie eqoqiwe inganikezwa abantu besithathu.
Okusemqoka ukuthi iwebhusayithi yethu isebenzisa ama-cookie ukuthuthukisa isipiliyoni sakho sokuphequlula. Ama-cookie awakwazi ukukukhomba futhi uma uqhubeka upheqa i-OnlineCasinosOnline.co.za uvumelana nokuthi inkampani yethu isebenzisa amakhukhi.
Okwamanje, ungase uthande ukuvala ama-cookie kuwebhusayithi yethu nakwamanye amasayithi. Uma ufuna ukukwenza lokho indlela enhle kakhulu ukusebenzisa isiphequluli sakho. Sincoma ukubheka isigaba Sosizo sesiphequluli noma ukubheka ikhasi Elimayelana Nama-cookie elinikeza usizo ngazo zonke iziphequluli ezinkulu zanamuhla.